Shiinaha Silicone Folding Cups warshad iyo soosaarayaasha | SJJ
Weligaa ma sawirtay inaad haysato koob nadiif ah oo caafimaad qaba oo si ku habboon loo cabbi karo markaad socotid, xero ku jirto, safarro ganacsi, aad dibadda ugu safraysid qoysaskaaga ama saaxiibbadaada? Hadda Koobabka Silicone iyo Dhalooyinka laaban karo oo la qaadan karo ayaa tan run ka dhigaya. Koobabka silicone iyo dhalooyinka waxaa lagu sameeyaa sma ...
Weligaa ma sawirtay inaad haysato koob nadiif ah oo caafimaad qaba oo si ku habboon loo cabbi karo markaad socotid, xero ku jirto, safarro ganacsi, aad dibadda ugu safraysid qoysaskaaga ama saaxiibbadaada? Hadda Koobabka Silicone iyo Dhalooyinka laaban karo oo la qaadan karo ayaa tan run ka dhigaya. Koobabka silikooniga iyo dhalooyinka waxaa lagu sameeyaa cabbir yar oo leh nooc kasta oo ku dhegan sida xargaha, suumanka, faraantiyada muhiimka ah, silsiladaha muhiimka ah, jillaabyada iyo kuwa kale, way ku habboon tahay inaad geliso boorsooyinkaaga ama jeebabkaaga sidoo kale. Qalabka silikoon ee darajada cuntada waa ammaan, koobabka silikooniga iyo dhalooyinka waa la laalaabaa waxaana lagu ridayaa boorsooyinkaaga ama jeebabkaaga si aad u ilaaliso dhinaca gudaha nadiif iyo caafimaad. Naqshaduhu waxay noqon karaan qaabab iyo cabbirro kala duwan, astaamo iyo midabyo kala duwan ayaa ka dhigaya koobabka silicone iyo dhalooyinka mid qurux badan, soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh. Aad bay ugu habboon tahay oo waa yaab in la isticmaalo koobabka silikooniga iyo dhalooyinka iyadoon loo eegin bannaanka ama gudaha. Koobabka silikooniga ah iyo dhalooyinka ayaa ah aaladaha nolol maalmeedkaaga iyo waliba alaabada aadka u fiican ee dallacsiinta, ganacsiga, hadiyadaha, xusuusta iyo wixii la mid ah.
Lifaaq: Xadhkaha, Suumanka, siddooyinkii muhiimka ahaa, silsiladihii muhiimka ahaa, qabsatooyinkii ama raac macmiilkii
MOQ: 200 kumbiyuutar ama lagu dhejiyay lifaaqa
Hore: Xargaha Silikoon
Xiga: Alaabta Jikada Silikoon
Xadhigga Bar / Kaydka / Kaydka Sawirka